CSS 35 CSS छवि प्रभावहरू जुन तपाईं आफ्नो वेबसाइटको लागि याद गर्न सक्नुहुन्न क्रिएटिव अनलाइन
Really 35 वास्तवमै रमाईलो CSS छवि प्रभावहरू
मानुएल रामीरेज | | CSS, छविहरू
आज वेबमा छविहरू छन् एक मुख्य ध्यान-हत्तक बन्नुभएको छ प्रयोगकर्तालाई जो यसमा सबै प्रकारका शीर्षकहरूको लागि पुग्छ। फोटोग्राफी, यात्रा, उत्पादनहरू वा कुनै पनि प्रकारको दृश्यबाट छविहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू मध्ये एक हुन्, त्यसैले यदि हामी स्ट्राइकि effect प्रभाव उत्पादन गर्न सक्षम भयौं भने, त्यो फोटोले हाम्रो वेबसाइटमा आएको प्रयोगकर्तालाई समेट्ने शक्ति पाउनेछ।
यो केवल ती मध्ये धेरै यी प्रभावहरु एक वेबसाइट आगन्तुक मा प्राप्त गर्न सक्षम छन्। CSS प्रभावहरू जुन केहि केसहरूमा वास्तवमै आँखा चिम्लिने हुन्छ र अन्यमा तिनीहरूसँग सरल हुनुको उद्देश्य छ, जे होस् सधैं हामी सबैले खोज्ने कुरा प्राप्त गर्ने: जुन प्रयोगकर्ताले हाम्रो वेबसाइटले प्रस्ताव गर्ने सबै कुरामा ध्यान दिएर बस्छ। अब 33 XNUMX CSS छवि प्रभावहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस् जुन सामर्थ्यशाली आँखा लिनेहरू हुन्।
1 फ्लुइड ट्विस्टिंग छवि थ्रीडी
2 थ्रीडी होभर प्रभाव
3 CSS थ्री पनोरमा
4 "टिल्ट" परिप्रेक्ष्यमा छविहरू
5 भेनिस पट्टि
6 छवि विभाजन गर्नुहोस्
7 छवि प्रभाव होभर
8 मिरर प्रभाव
9 परावर्तन प्रभावको साथ छवि
10 छवि होभर प्रभावमा टिल्ट छ
11 होभर ब्लर प्रभाव
12 छवि होभर
13 SVG मा होभर प्रभाव
14 होभरमा पाठ बाट छवि
15 पृष्ठभूमि छवि को भाग प्रकट गर्दै
16 होभर एनिमेसन
17 ट्र्याकिंग होभर प्रभाव
18 छवि जुम
19 जुम होभर प्रभाव
20 म्याग्निफाइ glass ग्लास प्रभाव
21 कुनै जाभास्क्रिप्ट होभर छैन
22 CSS ओभरले प्रभाव
23 चित्रहरु को लागी Hovy
24 छवि ओभरले
25 छवि प्रभाव ओभरले
26 छवि ओभरले प्रभाव
27 आइकन एनिमेसनको साथ प्रभाव होभर
28 उपशीर्षकहरूको साथ प्रभाव होभर
29 थ्रीडी होभर दिशा प्रभाव
30 छवि स्केल
31 प्रतिक्रिया साथ iOS छाया प्रभाव
32 छाया शैली आईओएस १०
33 छवि संक्रमण प्रभाव
34 स्क्रोल छवि संक्रमण
35 छविलाई माउस व्हिलको साथ स्क्रोल गर्दै
फ्लुइड ट्विस्टिंग छवि थ्रीडी
यो छवि प्रभाव साँच्चै जब आश्चर्यजनक हुन्छ छविलाई थ्रीडी क्यूबमा विघटन गर्नुहोस् जुन यसको ठाडोपनका बारे घुमाउन सक्षम छ उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव उत्पादन गर्न। CSS3D को आधारमा, यदि तपाइँ यसलाई तपाइँको वेबसाइटमा लागू गर्न सक्षम हुनुभयो भने, आगन्तुक अवाक् हुनेछ।
तपाइँको वेबसाइट को लागी more 35 अधिक CSS पाठ प्रभावहरु
थ्रीडी होभर प्रभाव
अर्को महान दृश्य प्रभाव प्राप्त गर्न जब हामी छवि माथि माउस सूचक छोड्छौं, यो गिर जस्तै यदि एक द्वारा प्रहार। अर्को उत्कृष्ट छवि प्रभावको लागि एक महान एनिमेसन।
CSS थ्री पनोरमा
एचटीएमएल र सीएसएस एक बनाउन को लागी सँगै जानुहोस् उत्कृष्ट दृश्य प्रभाव मानौं हामी कुनै शहरको भवनको माथिबाट हेर्दैछौं।
तपाईंको वेबसाइटको टाइपोग्राफीको लागि २ essential आवश्यक CSS पाठ प्रभावहरू
"टिल्ट" परिप्रेक्ष्यमा छविहरू
Un दृश्य प्रयोग जुन वेब भागको रूपमा विशेष उद्देश्यको सेवा दिन सक्छ।
एक ठूलो दृश्य प्रभाव हरेक समय माउस सूचक छोड्नुहोस् जसले गर्दा यो दुई विरोधाभासहरूको बीचमा परिवर्तन हुन्छ जुन छविले दिन्छ।
छवि विभाजन गर्नुहोस्
छवि माथि माउस पोइन्टर होभर गरेर, यो यसलाई उत्तम रचनाको लागि विस्तार गरिनेछ.
छवि प्रभाव होभर
E छोड्दा ग्रिड प्रभाव उत्पन्न हुन्छl माउस सूचक निर्दिष्ट बिन्दुमा छविबाट
चित्र ऐनाको प्रभावको साथ स्क्रोलहरू जब हामी माउस सूचकलाई दायाँ देखि बाँया र यसको विपरित स्लाईड गर्छौं।
परावर्तन प्रभावको साथ छवि
खोज्ने कार्य छविमा परावर्तन प्रभाव प्रोजेक्ट गर्नुहोस् जुन हामीले यो सीएसएस छवि प्रभावको लागि प्रयोग गर्यौं।
छवि होभर प्रभावमा टिल्ट छ
पुग्न सक्छ थोरै चक्कर आयो कसरी तस्बिर को पक्षहरु लाई एक धेरै हड्ताल दोहोरो प्रभाव उत्पादन।
होभर ब्लर प्रभाव
जब हामी इमेज मार्फत सूचक सार्छौं, धमिलो प्रभाव पैदा गर्दछ त्यो सेकेन्डमै हराउँछ।
को एक प्रभाव छ विस्थापन उही समयमा जुनमा हामीले सूचक राख्यौं छवि माथि माउस।
SVG मा होभर प्रभाव
एक महान होभर प्रभाव कि राख्छ लुकेको छवि खोलियो नाम भित्रै। छविहरूको रचनात्मक र जिज्ञासु ग्यालरी प्रदर्शनको लागि उत्कृष्ट समाप्त र उत्तम।
होभरमा पाठ बाट छवि
पाठले छविलाई प्रकट गर्दछ जब माउस पोइन्टर आँखा लिने एनिमेसनको साथ होभर गर्दछ अन्धा प्रभाव संग त्यो बीचबाट खुल्छ।
पृष्ठभूमि छवि को भाग प्रकट गर्दै
मानौं हाम्रो हातमा छ एक टेलीफोटो लेन्स को क्रसहेयरपृष्ठभूमि छवि को भाग प्रकट हुन्छ जब हामी माउस सूचक लाई सार्छौं।
महान प्रभाव को, तर यसको संरचना मा धेरै सरल। यदि तपाई केहि खोज्दै हुनुहुन्छ भने सरलीकृत र न्यूनतम, यो प्रभाव तपाईं प्रेम मा पड़्नेछ।
ट्र्याकिंग होभर प्रभाव
अन्य सरल प्रभाव एक विशेष उद्देश्य को लागी।
यो हो विशिष्ट जुम प्रभाव कि तपाइँ पक्कै तपाइँको वेबसाइट मा अब लिन चाहानुहुन्छ।
जुम होभर प्रभाव
अर्को विकल्प जस्तै जूम प्रभाव जब हामी सूचक छोड्दछौं छवि मा माउस पेच।
म्याग्निफाइ glass ग्लास प्रभाव
जस्तो यसको नामले देखाउँदछ, माउस सूचक छवि माथि बदलिनेछ म्याग्निफाइ। ग्लासमा जुन यसलाई म्याग्निफाइ गर्दछ।
कुनै जाभास्क्रिप्ट होभर छैन
कुनै जाभास्क्रिप्ट छैन तपाईं एक जूम प्रभाव पुन: सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ एक चर ग्रिड संग छवि।
CSS ओभरले प्रभाव
Un तहको लागि शुद्ध CSS प्रभाव हामीसँग भएको छविमा माउन्ट गरिएको छ।
चित्रहरु को लागी Hovy
तपाईंसँग प्रयोगकर्ता तत्वहरूको लागि CSS एनिमेसनहरूको पुस्तकालय छ। तपाईं लिंकमा ती सबै देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई उत्तम सूट गर्दछ। तपाईंसँग छनौट गर्न धेरै प्रभावहरू छन् उत्कृष्ट गुणस्तरको।
उच्च-गुणवत्ता रेखा एनिमेसनको साथ, आँखा तान्ने लेयरिंग चित्रित छ। अर्को तपाईंको मनपर्ने बन्न सक्छ।
छवि प्रभाव ओभरले
हामी अर्को प्रभावको साथ फर्कन्छौं HTML र CSS मा ओभरले जसमा गोलाकार रेखाहरू मुख्य पात्र हुन्।
छवि ओभरले प्रभाव
विभिन्न वेब तत्वहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिने स्ट्राइकि over ओभरले प्रभाव। एक सानो रचनात्मकता एकीकृत गर्न सकिन्छ कार्डमा यो लेख मा जस्तै.
आइकन एनिमेसनको साथ प्रभाव होभर
आइकन एनिमेसनको साथ उच्च गुणवत्ता जुन तपाइँको पहिलो केहि परिवर्तनहरूमा काजोल हुनेछ। उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ महान प्रभाव गर्न पाठ ल्याउनुहोस्.
उपशीर्षकहरूको साथ प्रभाव होभर
अर्को अर्को महान होभर प्रभावको साथ धेरै सहज एनिमेसनको साथ देखा पर्ने उपशीर्षकहरू र प्राप्त।
थ्रीडी होभर दिशा प्रभाव
एक धेरै उत्तेजक छवि प्रभावहरू तपाई सम्पूर्ण सूचीमा देख्नुहुनेछ। को माउस सूचक «3D क्यूब for को लागि मार्गदर्शक बन्नेछ.
अर्को साधारण प्रभाव, तर धेरै फलफूल बिना धेरै आकर्षक.
प्रतिक्रिया साथ iOS छाया प्रभाव
Un धेरै धूमधाम बिना प्रभाव, तर यसले निर्माण गर्ने छाया प्रभावमा धेरै ठोस, किनभने यस्तो देखिन्छ कि "जमीन" बाट हटाइएको छ।
छाया शैली आईओएस १०
माउस सूचक छ 'पुश' प्रभाव छविमा जसले महान यथार्थवादको उत्पादन गर्दछ। निकै रोमान्चक।
छवि संक्रमण प्रभाव
Un अद्भुत संक्रमण प्रभाव जसमा छवि ग्रिडहरूको ग्रिडमा विघटित हुन्छ। तपाइँ प्रभावलाई अधिक समय देखा पर्न सक्नुहुन्छ।
स्क्रोल छवि संक्रमण
Un धेरै ट्रेंडी र रचनात्मक संक्रमण प्रभाव तपाइँको वेबसाइट को लागी। यस CSS मा अपोइन्टमेन्ट नगुमाउनुहोस्।
छविलाई माउस व्हिलको साथ स्क्रोल गर्दै
तपाईले गर्नु पर्छ तपाईले माउस व्हिल प्रयोग गरेको क्षणमा यसलाई लागू गर्नुहोस् एक महान संक्रमण एनिमेसनको साथ एक छविबाट अर्कोमा स्विच गर्न। दर्शनीय।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » टेक्नोलजीज » CSS » Really 35 वास्तवमै रमाईलो CSS छवि प्रभावहरू
Sandy Hernandez भन्यो
नमस्कार मलाई तपाईको पोष्ट गरिएको प्रभावलाई मनपर्‍यो। संयोगले तपाईले कसरी प्रभाव पार्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ जहाँ तपाइँ छविमा सूचक राख्नुहुन्छ र तलबाट माथि सर्दछ, वेब पृष्ठहरूको पूर्वावलोकन प्रदर्शनको लागि आदर्श। यहाँ के भन्न खोजिएको मेरो एक उदाहरण छ, सेक्सनमा ATE भर्खरको वेबसाइटहरू
Select वेबसाइट सेलेक्टअवेब्स.क.बाट
Sandy Hernández लाई जवाफ दिनुहोस्
उत्कृष्ट पृष्ठ र पोष्ट, यो मेरो लागि धेरै उपयोगी छ किनकि मलाई आन्तरिक अनुप्रयोगहरूमा पोर्टल पहुँच प्यानलका लागि केही प्रभावहरू आवश्यक पर्दछ। यी योगदानका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।
रजर गेब्रियल भन्यो
उत्कृष्ट प्रभावहरू। म स्वयं-शिक्षित छु, मैले सँधै वेब विकासको विचारलाई धेरै मनपराएको छु, मँ कसरी सुरु गर्ने भन्ने बारे तपाइँको सल्लाह चाहान्छु र कुन क्रममा सिक्ने क्रममा। सादर
रजर गेब्रियललाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, तपाईंको सामग्री को लागी धन्यवाद। आज तपाइँको पृष्ठ पत्ता लगाउनुहोस्। यो अचम्मको कुरा हो। पठन र क्वेरीहरूको अन्त छैन जुन यसमा बनाउन सकिन्छ। ;)
नातालियालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार नतालिया! मलाई खुशी छ कि तपाईले यहाँ रचनाहरू अनलाइन पढ्नुभयो। शुभकामना!
हे राम्रो प्रभावहरूको शानदार सूची, यो एलिमेन्टरको साथ WordPress मा कसरी लागू गर्ने भनेर हेर्न धेरै राम्रो हुनेछ
Mendozalz लाई जवाफ दिनुहोस्